Wararka – Page 50 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo Su’aalo Laga Weydiinayo Khilaafka Somaliya iyo Kenya
Xildhibaanada Kenya ayaa saakay su’aalo ka weydiina haweeneyda ah wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee lagu magacaabo Monica Juma khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda baarlamanka Kenya Katoo Metito ayaa sheegay inay u baahan yihiin cadeymo badan oo ku aadan sababta dhalisay khilaafka labada dal. “Waxaan rabnaa inaan helno faah-faahin ...
Ciidamadda Jabuuti iyo kuwa Al-Shabaab oo Ku Dagaalamay Hiiraan
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Dagaal u dhaxeeyay Ciidamadda Jabuuti Ee qeybta ka ah Howlgalka AMISOM iyo dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab oo ka dhacay Gobolka Hiiraan. Dagaalkaan ayaa ka dhacay Degmadda Jalalaqsi oo Saldhigyo ay ku leeyihiin Ciidamadda Dowladda Jabuuti. Sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka, dagaalka xoogiisa ayaa dhacay Duhurnimadii shalay, waxaana soo qaaday dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab. Ciidamadda Jabuuti ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Talaado ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 19-02.2019
Dowladdaha Soomaaliya iyo Sacuudiga oo Kawada Hadlay Arrimo Muhiim ah+Sawirro
Ra’iisul Wasaree ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ay wehliyaan wasiirrada maaliyadda iyo xannaanada xoolaha, xoghayaha joogtada ah ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta magaalada Riyaad kula kulmay qaar kamid ah wasiirrada Boqortooyada dalka Sucuudi Carabiya oo Bahwadaag ganacsi iyo dhaqaale la ah Soomaaliya. Wasiirada iyo mas’uuliyiinta kale ee kulamada uu la ...
Farmaajo oo La Kulmay Dhigiisa Dalka Burundi Pierre Nkurunziza+Sawirro
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Burundi, waxaana garoonka diyaaradaha Bujumbuura kusoo dhaweeyay dhiggiisa dalkaas Mudane Pierre Nkurunziza. Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha dalka Burundi Mudane Pierre Nkurunziza ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sare u qaadidda iskaashiga dhinaca nabadgelyada. Burundi waxay ka mid tahay waddamada ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Isniin ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 18-02.2019
Madaxweyne Farmaajo oo Safar Ugu Ambaxabay Dalka Burundi+Ujeedka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Burundi, kaddib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalkaas. Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha dalka Burundi Mudane Pierre Nkurunziza ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sare u qaadidda iskaashiga dhinaca nabadgelyada. Burundi waxay ka mid tahay waddamada ...
Al-Shaabab oo Dilay Sarkaal Cabdi Abuukar Cali (Waa kaa hayaa)
Wararka ka imaanaya Degmadda Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku waramaya in kooxo hubeysnaa ay halkaas ku dileen Sarkaal ka Tirsanaa Ciidamadda Asluubta Soomaaliyeed. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal kooxo hubeysnaa ayaa dilay Sarkaalka oo ku sugnaa Xaafadda damaley ee gudaha Degmadda Afgooye. Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Abuukar Cali oo ku Magac dheeraa “Waa kaa ...
Faah-faahin:-Muwaadin Soomaaliyeed oo Xalay Lagu Dilay Koonfur Afrika
Kooxo Burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa xalay dilay Muwaadin Soomaaliyeed oo sidoo kale ahaa Ganacsade. Muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yuusuf Maxamed Ibraahim,wuxuuna dilka ka dhacay Xaafada New Brighton Magaalada Port Elizabeth Ee Gobolka Eastern Cape ee dalka koonfur Afrika. Sida ay inoo xaqiijiyeen qaar kamid ah Ganacsatada Xaafadda uu dilka ka dhacay, kooxo hubeysnaa ayaa hoygiisa ku ...
Kenya oo Garab Ka Helaysa Qaar kamid ah Madaxda Maamul Goboleedyada+Dhageyso
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo kamid ah Xildhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay khilaafka haatan u dhaxeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Isagoo la hadlayay idaacadda Simba ayuu sheegay in qaar kamid ah Madaxda Maamul Goboleedyadda ay la safan yihiin Dowladda Kenya oo haatan khilaaf uu kala dhaxeeyo Soomaaliya. Waxa uu sheegay hadii ay midoobaan Madaxda Soomaalida iyo shacabka ...
Page 50 of 1,771« First...203040«4849505152 » 607080...Last »